Home » Photography » ကျွန်တော်နဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ၀င့်ယမှုံလှိုင်
အာ့ မော်ဒယ်(လ) လားးး
သူက MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့သူပါ။ သိပ်နာမည်မကြီးဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ပါ မကြီးရေ။ အရည်အချင်း မပြည့်ဝသေးပါဘူး။
လွတ်တဲ့နေရာကရိုက်ရတာတောင် ဂလောက်အဆင်ပြေတာ.. မိုက်စ် :))
.အောက်ဆုံး အဖြူ အမည်းပုံလေးကမှ လှတာ ခိခိ။
အဲသည် နှမြောစိတ်ဟာ ပြန်လည်ပူနွေးလာပါတယ်။
ပညာသင်ဖို့ပါ အန်ကယ်ဂျီးရေး))
ကျွန်တော်နဲ့…. …. ဆိုတော့
ဒူး တော့ မည်းသကွယ် ။
ဒါ့ထက် ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ဒညင်ဝက်နဲ့ ဖွေးဖွေး စုံတွဲပုံများ တင်မှာလားလို့။
ရေးရင်းနဲ့ စာလုံးတွေ ကျကျန်ခဲ့လို့။
ဒညင်းဝက်လို ဖွေးဖွေးနဲ့ စုံတွဲပုံများ တင်မှာလားလို့ လို့ ရေးချင်တာ။
အဝတ် အစား ကြော်ငြာ တာလား၊ ပန်းဆိုင် ကို ကြော်ငြာတာလား ဆိုတာ အခါခါ ပြန်ဖတ်ကြည့် ရတယ်။
အဲဒီမျက်နှာပေါက်နဲ့.. ဆံပင်အရောင်… ဘယ်လိုမှ..လိုက်တယ်မထင်မိဘူး..။